Residenza Ruegna ***** kunye nesauna yabucala
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMarianne
I-170 m2 indlu ye-attic enamagumbi okulala ama-4 (iibhedi ezi-8), amagumbi okuhlambela ama-2, enye yazo ene-sauna, uya kufumana indawo eninzi kuwe, intsapho yakho kunye nabahlobo bakho ukuba baphumle kwaye banandiphe iholide yakho ezintabeni ngokupheleleyo.
- 2 iitesi (emazantsi nasezantsi ntshona)
-Ikhitshi yanamhlanje enesiqithi, umatshini wekofu, i-oveni, i-steamer
- 2 igumbi lokuhlambela (kubandakanywa igumbi lokuhlambela eli-1 elinesauna)
- igumbi ski
- Ikhabhathi enye kunye nesifuba esinye sedrowa kwigumbi ngalinye lokulala
-Iindawo ezi-2 zokupaka kwipaki yemoto engaphantsi komhlaba (+ indawo yokupaka eyongezelelweyo ngaphandle)
Le ndlu ikwisakhiwo esingaphandle kwelali yaseTrin Mulin.
Ilali entle yeentaba iTrin Mulin ibekwe malunga neekhilomitha ezi-4 ukusuka eFlims kwindawo ezolileyo.Ukongeza kwivenkile yokutya kunye nenkundla yentenetya, iTrin Mulin ibonelela ngeendawo ezahlukeneyo zohambo kunye nevenkile yokutyela (imizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka kwigumbi lokuhlala).
Ebusika, ukongeza kuluhlu olubanzi lweentaba zeFlimser / Laax / Falera, kukho ngaphezulu kwe-12 km yeendlela ezimangalisayo ezinqumla ilizwe kwiindawo ezininzi ezithe tyaba ngakwicala lomnyango.
Ehlotyeni uya kufumana iindlela ezininzi zokuhamba eziphinda ziqale kanye kwindawo yokuhlala. Ichibi elincinane lihamba malunga nemizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwigumbi, elilungele ukuqubha ehlotyeni.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$435